Hayaankii Maxamed Salah Iyo Jidkii Qodxaha Lahaa Ee Uu Ku Gaadhay Xiddignimada | Berberatoday.com
Hayaankii Maxamed Salah Iyo Jidkii Qodxaha Lahaa Ee Uu Ku Gaadhay Xiddignimada
Warbixin Khaas Ah: Xidiga Masaariga Ahi Wakhti Xaadirkan Waa Gool Dhaliyaha Ugu Qiimo Badan Yurub, Laakiin Noloshiisii Hore Wuxuu Soo Maray Jid Godad Badan Balse Toosnaa.
Maxamed Saalax, wuxuu ahaa 14 jir, markii uu qabsaday dhabbihii caqabadaha badnaa ee uu ku soo gaadhay xiddignimada.
Kadib markii uu sii laban laabay qabsashadaha quluubta daawadeyaasha dacalada Dunida muuq baahiyeyaasha kala socday habeenkii Khamiistii, waxaa mar kaliya la isweydiiyey, taariikhda iyo Safarkii halka ujeedo lahaa ee weeraryahanka afka hore uga ciyaara naadiga Liverpool, kaga soo bilaabay, riyada wiilka yar ilaa xidig ka dhex mudhay xidigaha dunida kubadda cagta.
Kuraygii Guntaday Go’aanka adag, wuxuu bilaabay inuu maalin kasta galo safar 10 saacadood ah, shan cisho todobaadkii, kaas oo ka bilaabmi jiray, baska ka baxa tuuladiisa Nagriig ee sii qaada jidka hoga iyo haadaanta miidhan ah ee taga caasimada Qaahira, si uu uga sii raaco tareenka uu ku gaadhayo xerada naadigii uu ka bilaabay ciyaaraha ee El Mokawloon.
Isla marka uu soo gaadhona, isla markaana dhamaysto hawl maalmeedkii, wuxuu si dhakhso ah mar kale dib ugu boodi jiray tareenka si uu uga gaadho inta aanu ka go’in baskii ku celin lahaa gurigoodii iyo tuuladii yarayd, Deg-degaas oo sababay inuu ka gaadhi waayo ama heli waayo fursadii uu kooxda saaxiibo ugu dhex yeelan lahaa.
Saalax wuxuu go’aan ku gaadhay inuu qabsado jidkii ay mareen xidigii kubada cagta ee qaarada Afrika ka soo jeeday, sidaas daraadeed, shilin kasta oo nuse saacaha loogu siiyo inuu ku cuno dugsiga Mohamed Ayyad Al-­Tantawy school wuxuu u isticmaali jiray kharashka safarka maalinlaha ah ee uu uu ku tagayo magaalada Qaahira.
Saalax (Calaamadsan) oo 15 Jir ah
“Aad buu u yaraa markii ugu horeysay ee uu noo yimid, inta badan wiilashii gadihiisa ahaana waxay ugu yeedhi jireen, Reer baadiyihii,” sidaas waxaa yidhi, tabobarihiisii ugu horeeyey ee kooxda El Mokawloon, Mohammed ­Radwan.
“Dareenkii nacaybka ahaa ee uu naanaystaa ka qaadayna, waxay markii dambe u noqotay sahayda safarkii uu ku jiray.
“Mar aad ku tidhaahdo waxaas sameena, wuxuu caado u lahaa inuu kaga jawaabo, ‘Waad mahadsan tahay tabobare’.”
Saalax Oo La Sawiran Asxaabtiisii Tuulada Nagrig
Yasidii ardayda ay wax wada baran jireen iyo inay ka dhigeen, kaydka saddexaad ee difaaca baasha dambe waxay u ahayd marmarsiinyo fiican oo uu ku helay fursad uu kaga nasto safarkii maalinlaha ahaa ee dheeraa ee ilaa Qaahira.
Laakiin Saalax wuu diiday inuu is dhiibo, waxaanu ku dhawaaqay: “Waxaan doonayaa inaan iskuulka hore uga rawaxo, si aan tabobarka xili hore ugu safro. Waxaan jecelahay inaan dhigto dugsiga laga bilaabo 7am ilaa 9am kadibna, waxaa helay jawaab rasmi ah oo igaga timid dugsiga, laguna leeyahay, ‘Mo iskuulka hore ayuu uga rawaxi karaa, si uu 2 da duhurnimoba u gaadho tabobarka’.
“Haddii aadan haysan marmarsiinyo fiican, way igu adkaan lahayd inaan iskuulka fasax ka helo, laakiin anigu waxaan doonayay inaan noqdo ciyaaryahan weyn, sidaas darteed waa inaan marmarsiinyo wanaagsan helaa. Marka waxaan qiyaasayaa inay taasi ahayd mid u qalmaysay inaan ku bixiyo wax kasta iskuna kalsoonaado, laga yaabee haddii aanay ii shaqayn lahayn, inaanay arimuhu aniga ii wanaagsanaan lahayn.”
Saalax Oo Sideed Jir ah – Oo la Sawiran Walaalihii
Waxaa jira arimo dhawr ah oo kordhiya dedaalka koritaan ee ciyaaryahanka Afrika ka soo baxa, Talada eheladiisa, Dhiiri galinta xidigaha waaweyn ee xulka qarankiisa iyo damaca ka bixis ee nolosha faqriga ah.
Saalaxna, waxaa ugu horeyn caawiyey wejigii furnaa isla markaana mar walba u qosli jiray ee Aabihii Alah Ghali, kaas oo aan waligii shaki ka galin awoodiisa, lana rabay inuu ku dhiiri galiyo mar walba mustaqbalkiisa ciyaaryahanimo. Marar badan baa jirtay oo Aabihii laftiisu uu wiilkiisa Saalax u soo qaaday ilaa Qaahira si uu kaliya u soo daawado tabobarka uu samaynayo.
Dhalinyaridii xiligaasi, shaqsiga ay kubada cagta kaga dayan jireen wuxuu ahaa Mohammed Abu Trika, ­oo loo tixgaliyo inuu ahaa laacibka ugu wanaagsan xidigihii qaranka Masar soo maray. Wuxuu afar jeer ku guuleystay abaal marinta xidiga Afrika ee sanadka, qarankiisana wuxuu u qaaday laba koob oo ka qaramada qaarada Afrika ah.
Sida uu sheegay Diaa El-Sayed oo ahaa tabobarihii Saalax ee xulka 20 jirada ka yar, kaas oo ku hogaamiyey dhalinyaradii xulka Faraacinada markii ugu horeysay inay meel fiican ka gaadhaan tartankii koobka aduunka dhalinyada da’aha isku dhafan ee sanadii 2011 kii wadanka Colombia marti galiyey, wuxuu yidhi: “Sababo badan awgood, Saalax wuu jeclaa Abu Trika.
Saalax Oo Ka Qayb Qaadanaya Tartankii London Olympics
“Wuxuu garoonka tabobarka ku samayn jiray, farsamooyin uu ka soo dheegtay, cajaladaha muuqaalka ah ee uu ka daawaday ciyaaryahan Abu Trika, had iyo jeerna wuxuu u sheegi jiray ciyaaryahanada ay isku kooxda yihiin in ciyaaryahanada ku xamaasha kubada cagta looga baahan yahay inay lahaadaan farsamooyin lamid ah kuwa Trika.
“Waxaan ogahay inay ahayd ciyaarihii London Olympics halkii uu ku soo bandhigay awoodiisa duniduna ku aragtay, laakiin anigu, intii uu socday tartankii Colombia Ayaan kaga bogtay kuna ogaaday tayadiisa, waanan iska ogaa in mar ay noqotaba uu dunida xidig qarxay ka dhex noqon doono.”
Laakiin, waxaa Iyana halgan kale ahayd, talaabadii uu kaga gudbayay, ciyaaryahan ka ciyaara horyaalka Masar uguna gudbi lahaa Laacib Yurub ka ciyaara.
Jawaabtuse waxay noqotay mid deg-deg ugu timaada: Iyo tartankii Olambiga London ee 2012 kii.
Saalax Oo Ka Dhex Mudhay FC Basel
Ka Go’naanshihii inuu dunida Isku muujiyo oo ay ugu biirtay koriin maskax iyo jidheed, ayuu Saalax helay fursad uu kaga garab safto, ciyaaryahankii uu ku dayan jiray ee Mohammed Abu Trika, qaab ciyaareedkiisiina wuxuu qabsaday indhaha kooxda reer Swizerland ee FC Basel.
Hany Ramzy, tabobarihii xulka Egypt ee kooxda Olambiga, ayaa laga hayaa: “Wuxuu xad dhaaf u jeclaa inuu ka ciyaaro Yurub xiligaas, laakiin, aniga ayaa u sheegay inuu u baahan yahay inuu shaqo fiican qabto ciyaaraha Olambiga, marka uu hawshaas ka soo baxona uu la kulmi doono natiijada ka dhalata oo ka noqota mid ka farxin doonta – Waa taas marxaladii Saalax.
“Intii uu tartanku socday, wax kastaa waxay noqdeen kuwo isugu toos toosa isaga, isna wuxuu noqday mid Ilaahay aad ugu xidhan xiligaas. Layaabna igumay noqon wax kasta oo wanaag ah oo intaas kadib uu la kulmayay.”
U soo wareegistiisii kooxda Basel, ayaa ahayd jaran jaradii ugu horeysay ee Saalax ka soo qabsaday ka ciyaarista tartamada Yurub, qaab ciyaareedkiisii fiicnaana wuxuu soo jiitay oo qiimayn la daba galay,kooxda Liverpool ka hor intii aanay Chelsea heshiiska la soo saxeexan 2014 kii.
Markii uu u soo wareegay geggida Stamford Bridge na wuxuu wajahay halgan hore leh, oo negaansho ahaa, xaaskiisa Maggi ayaana ku canaanatay inuu isaga tago kooxda.
Amaah uu ugu wareegay naadiga Fiorentina ee wadanka Talyaaniga ayaanu qalinka ku duugay halka agaasimaha ciyaaraha Liverpool, Michael Edwards uu isagu halkiisa ka sii watay la socoshadii xaalada Saalax.
Hal xili ciyaareed oo uu Fiorentina guul ku gaadhayna, Roma ayaa Saalax heshiis amaah ah kaga soo qaadatay, iyadoo markii dambena heshiis rasmi ah u rogtay, Waxaanu u saxeexay 29 gool oo horyaalka ah.
Wuxuu Shiday Fiorentina – Goolkana wuxuu ka dhalinaya Tottenham
Xaggaagii u dambeeyey, ayuu Edwards maskaxdiisa ka soo fujiyey in la gaadhay wakhtigii ku haboonaa, waxaanu cadaadis ku saaray tabobare Jurgen Klopp inuu jebiyo rikoodhkii iibka naadiga u yaalay, kuna kharash gareeyo £38million ciyaaryahan hore ugu fashilmay Chelsea.
Wax yar kadibna wuxuu shiday Roma
Goolkiisii ugu horeeyey wuxuu Liverpool u dhaliyey ciyaartii u horeysay ee uu u saftay oo ay la ciyaartay Watford, 43 kii gool ee u horeeyey 47 kulan oo uu u saftay ayaanu xili ciyaareedkan marinayaa. Sidoo kalena, waxay u dhawdahay inuu naadiga ku hogaamiyo ciyaarta Finalka Champions League, Wuxuu sidoo kale hogaamiye ka ahaa guushii xulka Egypt ee u soo bixista koobka Aduunka dhawaan Ruushka ka bilaabmi doona isha Allah.
Markii uu dhaliyey goolkii dhamaadka ciyaarta kaga guuleysteen xulka qaranka Congo si ay ugu soo baxaan Isreeb reebka koobka aduunka, Mohammed Abbas, madaxweynihii hore ee naadiga Zamalek, mid kamid ah kooxaha ugu waaweyn Masar, ayaa u hibeeyey qasri.
Salah-na wuxuu kaga jawaabay, sidii uu yeeli lahaa geesi aan marna ilaabin ciidii uu ka beermay iyo caradii xundurtiisu ku aasan tahay. Waxaanu ugu deeqay ama ugu taborucay tuulada faqiirka ah ee uu ku dhashay ‘Nagrig’.
Warbixinta Waxaa Qortay Majalada : www.mirror.co.uk